Chọtara 242 ~ MATIU, MAK, LUK, JỌN, ỌLU OZI, ROM, 1 KỌRINT, 2 KỌRINT, GALETIA, EFESỌS, FILIPAI, KỌLỌSI, 1 TESALỌNAIKA, 2 TESALỌNAIKA, 1 TIMỌTI, 2 TIMỌTI, TAITỌS, FAILIMON, HIBRU, JEMES, 1 PITA, 2 PITA, 1 JỌN, 2 JỌN, 3 JỌN, JUD, NKPUGHE
“Ahụhụ dịrụ unu ndị Farisii na ndị ozizi iwu, ndị ihu abụọ! Nꞌihi na unu na-emechibido ndị ọzọ ụzọ ha gasi bata nꞌalaeze eluigwe, ma unu onwe unu adịghị abata, unu adịkwaghị enye ndị ọzọ ohere ịbata. Ahụhụ dịrị unu ndị ozizi iwu na ndị Farisii, ndị ihu abụọ! Nꞌihi na unu na-eme dị ka ndị dị nsọ site nꞌikpe ogologo ekpere nꞌakụkụ ụzọ nile ka mmadụ hụ unu. Ma unu na-eripịa akụ dị nꞌụlọ ndị inyom di ha nwụrụ. Unu ga-anata ikpe ọmụma.
“Ya mere, ana m agwa unu sị, aga m ezitere unu ndị amamihe nd ndị ozizi. Ụfọdụ nꞌime ha ka unu ga-egbu, ụfọdụ ka unu ga-akpọgide nꞌobe. Ndị ọzọ kwa ka unu ga-eyipụ uwe ha, tie ha ihe otiti nꞌazụ, nꞌime ụlọ ekpere unu. Unu ga-achụkwa ha ọsọ site nꞌotu obodo gaa nꞌobodo ọzọ.
Kpeerenụ Chineke ekpere ka unu ghara ịgba ọsọ a nꞌoge oke oyi, ma ọ bụ nꞌụbọchị izuike.
Ọzọ kwa, Jisọs banyere nꞌụlọ ekpere ndị Juu. Nꞌime ya ọ hụrụ otu nwoke aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ.
Ma Jisọs gwara nwoke ahụ aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ okwu sị, “Bilie, bịa guzo nꞌetiti ụlọ ekpere a.”
Otu onyeisi ụlọ ekpere ndị Juu aha ya bụ Jairọs bịara daa nꞌala nꞌihu ya.
Nꞌụbọchị izuike, ọ banyere nꞌụlọ ekpere ndị Juu dị nꞌebe ahụ, bido ikwu okwu Chineke. Ọtụtụ ndị gere ya ntị ka o juru anya bụ okwu si ya nꞌọnụ na-apụta. Ha jụrụ sị, “Ebee ka nwoke a nọrọ mụọ ihe ndị a nile? Ònye nyere ya amamihe a? Ebee ka o siri nweta ike ịrụ ọrụ ịrịba ama ndị a nile?
Jisọs naara ogbe beredi ise na azụ abụọ ndị a welie anya ya elu kpee ekpere gọzie ha. Ọ nyawara beredi ahụ nye ya ndị na-eso ụzọ ya ka ha kee ndị mmadụ ahụ. Otu a kwa ọ nyawakwara azụ abụọ ahụ nyekwa ha nile.
Mgbe ndị a nile lara, Jisọs hapụrụ ebe ahụ gaa nꞌelu ugwu ikpe ekpere.
Jisọs nyere iwu ka igwe mmadụ ahụ nọdụ ala. O weere ogbe beredi ahụ kpee ekpere nye Chineke ekele. Ọ nyawara beredi ahụ ntakịrị ntakịrị, nye ya ndị na-eso ụzọ ya ka ha kee ndị mmadụ ahụ nile. Ndị na-eso ụzọ ya kekwara ya.
Ha nwekwara azụ ntakịrị. Jisọs weere ya kpee ekpere, nyekwa Chineke ekele. Emesịa ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha kee ya.
Ọ gwara ndị nọ nꞌebe ahụ sị, “E dere ya nꞌakwụkwọ nsọ sị, ‘Ụlọ nsọ m ga-abụ ụlọ ekpere nye mba nile,’ ma unu emeela ya ka ọ ghọọ ọgba ndị na-apụnarị mmadụ ihe nꞌike.”
“Ya mere, ka m gwa unu, ihe ọ bụla unu rịọrọ mgbe unu kpere ekpere, nweenụ okwukwe na unu anatala ya, ọ ga-emezukwara unu dị ka unu siri kpee ya.
Ma mgbe ihe ndị a na-eme, lezienụ anya! A ga-akpụrụ unu gaa nꞌụlọ ikpe, tiekwa unu ihe nꞌụlọ ekpere dị iche iche. Nꞌihi m kwa, a ga-agbara unu akwụkwọ nꞌihu ndị eze na nꞌihu ndị na-achị achị. Oge a bụkwa oge unu ga-eji gwa ha ozi ọma ahụ.
Kpeenụ ekpere ka ihe ndị a hapụ ime nꞌoge oyi.
Emesịa, ha gara ije rute ebe a na-akpọ Getsemanị. Jisọs gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, “Nọdụnụ nꞌebe a ka m gaa nꞌihu nke nta ikpe ekpere.”
Ọ hapụrụ ha gaa nꞌihu nke nta, daa nꞌala. O kpere ekpere rịọ ma ọ ga-ekwe mee ka ihe ọjọọ na-akwado ịdakwasị ya gabiga, hapụ ịbịakwasị ya.
O kpere ekpere sị, “Nna, o nweghị ihe nyịrị gị ime. Ekwela ka ihe ọjọọ a bịakwasị m. Ma ọ bụghị uche m ka m chọrọ ka o mezuo, kama ka uche gị mezuo.”
Ọ hapụkwara ha ọzọ gaakwa nꞌihu, kpeekwa otu ụdị ekpere ahụ.
Ọ hapụkwara ha gaa kpeekwa ekpere ọzọ. Mgbe ọ lọghachiri nke ugboro atọ, ọ gwara ha sị, “Ùnu nọrịrị na-arahụ ụra ma na-ezukwa ike? O zuola! Bilienụ! Oge ịrahụ ụra agafeela! Lee! A rarala mụ bụ Nwa nke mmadụ nye nꞌaka ndị mmadụ ọjọọ.
Mgbe Zakaraya banyere ịchụ aja ahụ, igwe ndị mmadụ bịara ife Chineke nꞌụbọchị ahụ nọ nꞌezi na-ekpe ekpere, nꞌihi na ọ bụ omenala na mgbe ọ bụla onye nchụaja banyere ịchụ ụdị aja a, ndị mmadụ ga-anọ nꞌezi na-ekpe ekpere.
Mgbe ihe ndị a nile na-eme, ndị mmadụ ahụ gbakọrọ nꞌezi na-ekpe ekpere, nọkwa na-eche Zakaraya ka ọ pụta. O juru ha anya na ọ nọọla ọdụ nꞌime ime ụlọ nsọ ukwu ahụ.
Otu ụbọchị Jisọs sooro igwe mmadụ bịa ka Jọn mee ya baptizim. Mgbe Jọn mesịrị ndị mmadụ baptizim, o mekwara Jisọs baptizim. Ma mgbe Jisọs nọ na-ekpe ekpere, oge e mesịrị ya baptizim, eluigwe meghere.
Nꞌụbọchị Satọde ọzọ, Jisọs banyere nꞌụlọ ekpere ndị Juu bido na-ezi okwu Chineke. Nꞌụlọ ahụ, otu nwoke nọ ya, onye aka nri ya kpọnwụrụ akpọnwụ.
Mgbe ọzọ kwa, Jisọs gara rigoro nꞌelu ugwu ikpe ekpere. Ọ nọgidere nꞌebe ahụ abalị nile.
Gọzienụ ndị na-abụ unu ọnụ, ma kpeekwaranụ ndị ahụ na-akọcha unu ekpere.
nꞌihi na ọ hụrụ ndị Juu nile nꞌanya. O wukwaara anyị ụlọ ekpere.”
Mgbe ahụ otu onyeisi ụlọ ekpere ndị Juu a na-akpọ Jairọs, bịara daa nꞌala nꞌụkwụ Jisọs, rịọ ya ka ọ bịa nꞌụlọ ya.
Otu ụbọchị mgbe Jisọs nọ nanị ya na-ekpe ekpere, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya. Ọ jụrụ ha sị, “Onye ka ndị mmadụ sị na m bụ?”
Mgbe abalị asatọ gafere, Jisọs kpọọrọ Pita na Jọn na Jemes gaa nꞌelu ugwu ikpe ekpere.
Mgbe ọ nọ na-ekpe ekpere, ọdịdị ihu ya gbanwere. Uwe ya nwupụrụ ọcha, ọ chara nnọọ vaaa, chakarịa ihe ọcha ọ bụla anya mmadụ hụrụla.
Ọ gwara ha sị, “Mkpụrụ a ga-aghọ dị ukwuu ma ndị ọrụ dị nanị ole na ole. Kpeenụ ekpere rịọ Chineke onye nwe mkpụrụ ndị a ka o zite ndị ọrụ nꞌubi a.
Otu ụbọchị Jisọs nọ na-ekpe ekpere. Ndị na-eso ụzọ ya nọkwa nꞌebe ahụ ọ nọ na-ekpe ekpere. Mgbe o kpesịrị, otu nꞌime ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya, “Onyenwe anyị, zi anyị otu anyị kwesịrị isi kpee ekpere, dị ka Jọn siri zi ndị na-eso ụzọ ya.”
Jisọs zara ha sị, “Mgbe unu chọrọ ikpe ekpere, unu si otu a kpee ya, Nna anyị, ka e doo aha gị nsọ, ka alaeze gị bịa.
“Ahụhụ dịrị unu ndị Farisii! Nꞌihi na unu hụrụ ịnọdụ ala nꞌisi oche nꞌụlọ ekpere unu nꞌanya, hụkwa ekele pụrụ iche a na-ekele unu nꞌahia nꞌanya.
“Mgbe ha kpọtara unu nꞌụlọ ekpere ndị Juu, ma ọ bụ nꞌihu ndị na-achị achị, ikpe unu ikpe, unu echegbula onwe unu banyere ihe unu ga-ekwu iji gọrọ onwe unu.
Nꞌotu ụbọchị izuike ndị Juu, Jisọs banyere nꞌime otu ụlọ ekpere ndị Juu bido izi ihe.
Ma onyendu ụlọ ekpere ahụ were iwe nke ukwuu nꞌihi na Jisọs gwọrọ nwanyị a nꞌụbọchị izuike. O biliri gwa ndị mmadụ ahụ okwu sị, “E nwere ụbọchị isii nꞌime izu ụka mgbe mmadụ kwesịrị ịrụ ọrụ. Ọ bụrụ na ahụ esighị gị ike, ọ bụrụkwa na ị chọrọ ka a gwọọ gị, bịa nꞌime ụbọchị isii ndị a. Abịakwala nꞌụbọchị izuike ka a gwọọ gị!”
Okwu a Jisọs kwuru mere ka ihere mee ndị iro ya. Ma ndị nile nọ nꞌụlọ ekpere ahụ ṅụrịrị ọṅụ nꞌihi ọrụ ebube nile ọ rụrụ.
Otu ụbọchị Jisọs kọọrọ ndị na-eso ụzọ ya akụkọ iji gosi ha mkpa ọ dị ikpegide ekpere na-esepụghị aka tutuu Chineke aza ekpere ha.
Ọ gwara ha okwu sị, “Mmadụ abụọ gara nꞌụlọ nsọ ukwu Chineke dị na Jerusalem ikpe ekpere. Otu onye nꞌime ha bụ onye Farisii, onye nke ọzọ bụ onye ọnaụtụ.
“Jienụ onwe unu aka site nꞌebe ndị ozizi iwu nọ. Nꞌihi na ihe ha hụrụ nꞌanya bụ iyi uwe ogologo na-ejegharị ebe nile. Ihe na-atọkwa ha ụtọ bụ ka a na-ekele ha ekele dị iche nꞌime ahịa. Ha hụkwara ịnọdụ nꞌoche dị mkpa nꞌụlọ ekpere na nꞌoge mmemme ọ bụla nꞌanya.
Ma ha bụ ndị na-abakwuru ụmụ nwanyị di ha nwụrụ anwụ, pụnarị ha ihe ha nwere. Ha na-ekpe ogologo ekpere ka ndị mmadụ too ha. Ha ga-anata ikpe ọmụma dị ukwuu site nꞌaka Chineke.”
“Ma tupuu ihe ndị a nile emezuo, ndị mmadụ ga-ejide unu, kpagbuokwa unu. Ha ga-akpọrọ unu gaa nꞌụlọ ekpere ikpe unu ikpe. Ha ga-atụkwa unu mkpọrọ. Ha ga-ebo unu ebubo nꞌihu ndị eze na nꞌihu ndị na-achị achị nꞌihi na unu na-eso ụzọ m.
Ma nọọnụ na nche oge nile. Kpeerenụ Chineke ekpere ka o nye unu ike ịgbanarị ihe ndị a nile nke na-aga ime. Ka o nyekwa unu ike iguzo nꞌihu m mgbe m ga-alọghachi.”
Nꞌụlọ ahụ ha nọ, a dọbara ite mmiri isii buru ibu. Otu nꞌime ite ndị a na-eri ihe dị ka iri lita mmiri ạnọ. Nꞌime ite a ka ndị Juu na-agbanye mmiri ha ji asa ụkwụ ha, na aka ha, na ihu ha, tupuu ha ekpee ekpere.
Na Kapanọm ka Jisọs nọ kwuo ihe ndị a. Ebe ahụ ka ọ nọkwa kuziere ndị mmadụ okwu Chineke nꞌime ụlọ ekpere ndị Juu.
Ihe a ka ndị mụrụ ya kwuru nꞌihi na ha na-atụ egwu ndị Juu. Ndị Juu ekpebiela na ọ bụrụ na onye ọ bụla ekwuo na Jisọs bụ Onye nzọpụta ahụ, ha ga-achụpụ onye ahụ site nꞌụlọ ekpere ha.
Chineke adịghị anụ ekpere onye mmehie. Kama ọ bụrụ na onye ọ bụla na-arụ ọrụ ya, na-eme ihe ọ na-achọ, ọ bụ onye ahụ ka Chineke na-anụ olu ya.
Ma ụfọdụ nꞌime ndị isi nchụaja kweere na ya. Ma ha ekwupụtaghị nke a. Nꞌihi na ha tụrụ egwu ndị Farisii. Ha achọkwaghị ka achụpụ ha site nꞌụlọ ekpere ndị Juu.
Ha ga-esite nꞌụlọ ekpere ha chụpụ unu. Nꞌezie, oge na-abịa mgbe ha ga-egbu unu. Ha gaechekwa na ha na-efe Chineke mgbe ha na-eme nke a.
“Ugbu a ana m ekpe ekpere nꞌihi ndị a nile i nyere m. Ekpeghị m ekpere nꞌihi ndị nọ nꞌụwa. Kama ana m ekpe ekpere nꞌihi ndị a i nyere m, nꞌihi na ha bụkwa ndị nke gị.
Ekpeghị m ekpere ka i wepụ ha nꞌụwa, kama ana m achọ ka i debe ha nke ọma. Ka ha ghara ịdaba nꞌaka onye ụrụala ahụ bụ ekwensu.
“Ekpeghị m ekpere nꞌihi ndị a nanị. Kama ana m ekpekwa ekpere a nꞌihi ndị nile ga-ekwere na mụ, nꞌoge dị nꞌihu, site nꞌama ndị a ga-agba banyere m.
O kwuru nke a iji imezu okwu ahụ o kwuru mgbe o kpere ekpere sị, “Etufughị m onye ọ bụla nꞌime ndị ahụ i nyere m.”
Jisọs zara ya sị, “Nꞌihu ọha mmadụ ka m kwuru okwu nile m kwuru. Ekwuru m okwu Chineke nꞌime ụlọ ekpere na nꞌime ụlọ nsọ ukwu Chineke ebe ndị Juu na-ezukọ. Ekwukwaghị m ihe ọ bụla na nzuzo.
Ha nile jikọtara onwe ha ọnụ na-ekpe ekpere site nꞌoge ruo nꞌoge. Ndị sonyere ha bụ ụfọdụ ndị inyom na Meri nne Jisọs, na ụmụnna Jisọs.
ỌLU OZI 1:26
Mgbe ha kpesịrị ekpere, ha fere nza. Nza ahụ makwara Matayas. Ọ bụ ya ka ha họpụtara, gụnye ya ka ọ bụrụ otu nꞌime ndị ozi iri na abụọ ahụ.
Nꞌotu ụbọchị, Pita na Jọn gara nꞌụlọ nsọ ukwu Chineke ikpe ekpere. Ihe a mere nꞌelekere atọ nke ehihie.
Si nꞌajọ omume gị tụgharịa, kpeekwa ekpere. Ma eleghị anya Chineke ga-agbaghara gị echiche ọjọọ gị nile.
ỌLU OZI 8:24
Saimọn rịọrọ Pita sị ya, “Biko, kpee ekpere rịọrọ m Chineke, ka ihe ndị a nile i kwuru, hapụ ịbịakwasị m.”
Onyenwe anyị gwara ya okwu sị, “Bilie, gaa nꞌụzọ ahụ a na-akpọ Ama E Guzoziri, chọọ ụlọ nwoke a na-akpọ Judas. Nꞌụlọ nwoke a jụọ ajụjụ banyere nwoke a na-akpọ Sọl onye Tasọs. Ọ nọ nꞌebe ahụ na-ekpe ekpere.
Pita gwara mmadụ nile ka ha pụọ nꞌụlọ ahụ. O gburu ikpere nꞌala kpee ekpere. Mgbe o kpesịrị, o chere ihu ya nꞌebe ozu nwanyị ahụ dina kwuo okwu sị, “Dọkas, bilie!” Nwanyị ahụ nwụrụ anwụ meghere anya ya. Mgbe ọ hụrụ Pita, o biliri ọtọ, nọdụ ala.
Nꞌụbọchị nke abụọ ya, mgbe ndị ozi Kọniliọs nọ nso nꞌebe na-adịghị anya site na Jopa, ebe ha na-aga, Pita rigooro nꞌelu ụlọ ahụ ikpe ekpere. Oge ahụ bụ ihe dị ka elekere iri na abụọ nke ehihie.
ỌLU OZI 10:10
Mgbe Pita nọ na-ekpe ekpere, agụụ bidoro ịgụ ya. Ọ chọrọ ihe ọ ga-eri. Ma nꞌụlọ ahụ, a na-akwado ihe oriri nꞌoge ahụ. Nꞌoge Pita nọ na-eche ka e sichaa nri, ọ hụrụ ọhụ.
Kọniliọs sịrị ya, “Nꞌụbọchị anọ gara aga, mgbe m nọ na-ekpe ekpere nꞌoge ehihie, nꞌihe dị ka elekere atọ, na mberede, ahụrụ m otu nwoke ka o guzoro nꞌihu m. O yikwasịrị onwe ya uwe dị ọcha, nke na-egbukwa amụma.
“Nwoke a gwara m okwu sị, ‘Kọniliọs, Chineke anụla ekpere gị. Ọ hụkwala ọrụ ọma gị nile.
ỌLU OZI 11:5
Ọ gwara ha sị, “Otu ụbọchị, mgbe m nọ nꞌobodo Jopa, ahụrụ m ọhụ nꞌoge m na-ekpe ekpere. Nꞌime ọhụ a, ahụrụ m ihe yiri efere buru ibu. E budatara ya nꞌihu m. Efere a nwekwara ụkwụ igwe anọ. E sitekwara nꞌeluigwe zidata ya.
Ma nzukọ Kraịst ezughị ike site nꞌikpe ekpere nye Chineke. Ha rịọsịrị Chineke arịrịọ ike ka o debe Pita nke ọma nꞌime ụlọ mkpọrọ ahụ.
Ya mere, mgbe ha busịrị ọnụ nꞌime ekpere ha, e bikwasịrị Sọl na Banabas aka nꞌisi, zipụ ha ijere Chineke ozi.
Ma Pọl họọrọ Saịlas. Emesịa, mgbe ụmụnna kpeere ha ekpere tinye ha nꞌaka amara Onyenwe anyị,
Nꞌụbọchị izuike, anyị sitere nꞌobodo ahụ gaa nꞌakụkụ osimiri ebe anyị chọpụtara na ụfọdụ mmadụ na-ezukọ ikpe ekpere. Nꞌebe a ka anyị nọ kụziere ọtụtụ ụmụ nwanyị bịara ikpe ekpere okwu Chineke.
Nꞌetiti abalị, mgbe Pọl na Saịlas na-ekpe ekpere na-abụkwa abụ ito Chineke, ndị nile nọ nꞌụlọ mkpọrọ ahụ na-anụkwa olu ha.
ỌLU OZI 20:36
Mgbe Pọl kwusịrị okwu ndị a, o soro ha nile gbuo ikpere nꞌala kpeekwa ekpere.
“Alọghachikwara m na Jerusalem. Ma mgbe m nọ na-ekpe ekpere nꞌụlọ nsọ ukwu ahụ otu ụbọchị ahụrụ Onyenwe anyị nꞌime ọhụ. Ọ gwara m sị,
Nꞌoge ahụ nna Pọbiliọs nwere ahụ ọkụ na afọ ọsisa. Pọl banyere nꞌime obodo gaa leta ya kpeere ya ekpere bikwasịkwa ya aka. Ahụ dịrị ya mma ọsịịsọ.
Chineke nꞌonwe ya, onye m na-ejere ozi, site nꞌikwusa ozi ọma nke Ọkpara ya, ga-agbara m akaebe na m na-echeta unu mgbe nile nꞌekpere m ehihie na abalị.
Mgbe ọ bụla m na-ekpe ekpere, ana m arịọ ka ọ bụrụ ihe ga-ekwe mee na site nꞌike Chineke, aga m enwe ohere ịbịa leta unu.
Ị na-agwa ndị mmadụ ka ha ghara ịkwa iko, i leziela anya hụ na gị onwe gị adịghị akwa iko? Ị chọghị iji anya hụ ka mmadụ na-ekpere arụsị a kpụrụ akpụ, ma ọ naghị ezukpọ ego dị nꞌụlọ nsọ ukwu Chineke?
Ọ bụrụ na onye ọ bụla emejọọ gị, abụla ya ọnụ, kama kpeere ya ekpere.
Mgbe ọ bụla m na-ekpe ekpere, ana m ekele Chineke ekele nꞌihi onyinye amara nile o nyere unu site na Kraịst Jisọs.
1 KỌRINT 4:12
Aka anyị ka anyị ji arụpụtara onwe anyị ihe anyị na-eri. Mgbe ndị mmadụ na-abụ anyị ọnụ, anyị na-ekpere ha ekpere. Mgbe ha na-ata anyị ahụhụ, anyị nọ na-enwe ndidi.
Ka di na nwụnye hapụ igbochi ibe ha mmekọrịta nke anụ ahụ ruuru ha. Karịakwa ma ọ bụ na mkpebi ha nwere nꞌetiti onwe ha ịnọrọ iche nwoge nta nꞌihi inyefe onwe ha ikpe ekpere nye Chineke. Mgbe oge a gasịrị, ha ga-agakwa nꞌihu na mmekọrịta ha, ka e site otu a hapụ inye ekwensu ohere ịnwa ha ọnwụnwa nꞌihi enweghị ike ha ijide onwe ha aka.
Ma unu onwe unu nwere ike inyere anyị aka site nꞌikpere anyị ekpere. Nꞌihi na ọ bụrụ na ọtụtụ mmadụ anọgide na-ekpere anyị ekpere, ọtụtụ mmadụ ga-ekelekwa Chineke ekele nꞌihi ngọzi ọ na-agọzi anyị na nꞌihi nchebe ọ na-echebe ndụ anyị.
2 KỌRINT 12:8
Ekpeela m ekpere ugboro atọ rịọọ Chineke ka o wepụrụ m ahụ mgbu a.
2 KỌRINT 13:7
Ana m ekpekwa ekpere na Chineke ga-enyere unu aka ibi ezi ndu. Ọ bụghị nꞌihi na anyị chọrọ ka mmadụ site na ndụ unu hụ na anyị ziri unu ihe bụ ezi okwu, kama ọ bụ nꞌihi na anyị chọrọ ka unu na-eme ezi ihe ọ bụladị mgbe a na-ekwujọ anyị.
2 KỌRINT 13:9
Anyị na-aṅụrị ọnụ mgbe ndị mmadụ na-eleda anyị anya dị ka ndị na-adịghị ike, ma ọ bụrụ na unu onwe unu abụrụ ndị dị ike. Nꞌihi na ekpere anyị bụ ka unu tuozuo oke nꞌime Kraịst.
esepụghị m aka ikele Chineke ekele nꞌihi unu. Nꞌihi na mgbe nile ka m na-echeta unu nꞌekpere m nile,
Ọ bụ nꞌihi nke a ka mụ onwe m bụ Pọl, onye e tinyere nꞌụlọ mkpọrọ nꞌihi ikwusa ozi ọma Kraịst nye unu bụ ndị mba ọzọ, jiri na-ekpere Chineke ekpere.
Mgbe ọ bụla anyị na-ekpere unu ekpere, anyị na-ekele Chineke onye bụ Nna Onyenwe anyị Jisọs Kraịst ekele.
Ọ gaara atọ m ụtọ ma a sị na unu ga-ghọta otu m si gbasie mgba ike nꞌekpere m nꞌihi unu, na nꞌihi ndị nọ nꞌobodo Laodisia, na ndị nile na-enwebeghị ike ịhụ m ihu na ihu.
Na-echetakwanụ anyị nꞌekpere, ka Chineke meghere anyị ụzọ ikwusa ozi ọma, nke bụ ikwusa ihe omimi Kraịst. Ọ bụkwa nꞌihi ikwusa ozi ọma a ka m ji nọrọ nꞌụlọ mkpọrọ taa.
Na-ekperenụ m ekpere ka m nwee ike ịkọwa ozi ọma a nꞌụzọ ọ ga-esi kwe mmadụ nile ịghọta ya.
Epafras, odibo Kraịst Jisọs na onye bụkwa otu onye nꞌime ọgbakọ unu na-ekele unu. Oge nile ka ọ na-ekpe ekpere nꞌihi unu, na-arịọ ka unu guzosie ike nꞌokwukwe dị ka ndị tozuru oke, ndị maara ihe ha na-eme, ndị weere onwe ha nyefee nꞌaka ọchịchọ Chineke.
Ana m agba akaebe na ọ na-adọgbu onwe ya nꞌọrụ ikpe ekpere nꞌihi unu na nꞌihi ndị Laodisia na ndị Hierapolis.
Onye mmebi iwu ahụ ga-ebuli onwe ya elu imegide ndị nile na-asọpụrụ chi dị iche iche, na ofufe nile dị iche iche, na ndị na-ekpere Chineke nꞌeziokwu. Ọ ga-abanye nꞌụlọ nsọ ukwu Chineke nodụ nꞌebe ahụ kpọọ onwe ya Chineke.
Na mmechi okwu anyị, ụmụnna anyị, kpeerenụ anyị ekpere. Rịọnụ arịrịọ ka Chineke mee ka ozi ọma Onyenwe anyị na-aga nꞌihu. Ka ike dị nꞌozi ọma ahụ weta nchegharị nꞌime ndị nile ga-anụ ya dị ka o wetara nꞌime ndụ unu, mgbe anyị bịakwutere unu na mbụ.
Ọzọ kwa, kpesiekwaranụ anyị ekpere ike, ka anyị ghara ịdaba nꞌaka ndị mmadụ ọjọọ nꞌihi na ọ bụghị mmadụ nile hụrụ Onyenwe anyị nꞌanya.
Ihe mbụ m na-adụsị gị ọdụ ike ka i mee bụ nke a. Na-ekpesịrị ndị ọzọ ekpere ike. Rịọ arịrịọ ka Chineke meere ha ebere. Nꞌime ekpere gị nile na-enyekwa Chineke ekele nꞌihi ihe ọ ga-emere ha.
Nwanyị di ya nwụrụ, nke nọ nanị ya nꞌụwa, na-enweghị onye inyeaka, nwere olileanya na Chineke ga-enyere ya aka. Ọ na-anọgidekwa nꞌekpere ehihie na abalị na-arịọ enyemaka Chineke.
2 TIMỌTI 1:3
Ana m ekele Chineke ekele nꞌihi gị Timoti. Ana m ekpere gị ekpere kwa ụbọchị. Ọtụtụ mgbe kwa, ma ọ bụ nꞌime abalị, ka m na-ebili na-arịọ Chineke arịrịọ ka ọ gọzie gị. Chineke, onye bụ Chineke nke nna nna m ha, na Chineke nke m kwa. Ọ bụkwa nanị otu ihe ka m na-ezube nꞌime ndụ a, ọ bụ ime ihe ga-atọ ya ụtọ.
2 TIMỌTI 1:18
Ekpere m bụ ka Onyenwe anyị nye ya ezi ngọzi pụrụ iche nꞌụbọchị ahụ Kraịst ga-alọghachi. Ị makwaara nke ọma karịa ka m nwere ike ịgwa gị, otu o si nyere m aka nꞌEfesọs.
Mgbe Jisọs nọ nꞌụwa, o kpere ekpere nye Chineke. Mgbe ụfọdụ nꞌọnọdụ ekpere ahụ, ọ na-akwa akwa. Mgbe ọzọ kwa, anya mmiri na-ejupụta ya nꞌanya. O kpere ekpere ya nye Chineke nꞌihi na ọ maara na Chineke pụrụ ịzọpụta ya site nꞌọnwụ. Chineke nụkwara ekpere ya, nꞌihi na Jisọs bụ onye nchụaja na-erube isi.
Ọ̀ dị onye ọ bụla nꞌetiti unu nọ na nsogbu? Ka onye dị otu ahụ kpee ekpere. Ọ̀ dị onye na-aṅụrị ọṅụ? Ya bụọ abụ ito Chineke.
Ọ̀ dị onye nọ nꞌetiti unu ahụ naesighị ike? Ya kpọọ ndị okenye chọọchị ka ha kpeere ya ekpere, ka ha wụkwasịkwa ya mmanụ otite nꞌisi kpọkuokwa aha Onyenwe anyị.
Ọ bụrụkwa na ha sitere nꞌokwukwe kpeere Chineke ekpere ha, a ga-eme ka ahụ dị onye ọrịa ahụ mma. Onyenwe anyị ga-emekwa ka o site nꞌute ọrịa bilie. Ọ bụrụkwa na o mehiere, ọ ga-agbaghara ya mmehie ya.
Ya mere, kwupụtaranụ ibe unu mmehie unu, kpeekwara ibe unu ekpere ka Chineke gwọọ unu. Chineke na-anụ ekpere onye ezi omume, na-azakwa ya.
Ịlaịja onye amụma, bụrị mmadụ efu dị ka anyị, ma o kpere ekpere rịọ ka mmiri hapụ izo, mmiri ezokwaghị ruo afọ atọ na mkpirisi.
Emesịa, o kpekwara ekpere ọzọ, nke mere ka mmiri zoo, meekwa ka ala pupụta ihe oriri.
Matanụ nke ọma na Chineke, onye ahụ unu na-akpọku nꞌekpere, adịghị ele mmadụ anya nꞌihu mgbe ọ na-ekpe mmadụ ikpe. Ọ na-ekpe onye ọ bụla ikpe dị ka ọrụ ya si dị, nꞌihi ya, jiri itu egwu Chineke bie ndụ gị nꞌụwa.
1 PITA 3:12
Nꞌihi na Chineke si nꞌelu na-ele ndị ezi omume anya mgbe nile, ọ na-egekwa ntị nꞌekpere ha, ma ọ na-ele ndị ajọ omume anya ọjọọ.”
Ọgwụgwụ ihe nile adịla nso. Bụrụnụ ndị nwere akọnuche zuru oke, ndị nọ na njikere, na ndị na-ekpekwa ekpere.
Ọ bụrụ na ị hụ nwanna nꞌime Kraịst ka ọ na-eme mmehie na-adịghị edube onye na-eme ya nꞌọnwụ, kpee ekpere nꞌihi ya rịọ Chineke ka ọ gbaghara ya. Chineke ga-enyekwa ya ndụ. Ọ bụ nanị mgbe ị maara na mmehie ya bụ nke na-eduba onye mere ya nꞌọnkụ ka ị ga-ahapụ ikpere ya ekpere.
Mgbe Nwa atụrụ ahụ naara akwụkwọ ahụ, iri ndị okenye abụọ na anọ ahụ, ndị gbara ocheeze ukwu ahụ gburugburu dara nꞌala nꞌihu Nwa atụrụ ahụ. Ha nile nꞌotu nꞌotu jikwa opi na efere e ji ọlaedo mee, nke ihe na-esi isi ụtọ jupụtara nꞌime ha. Ihe na-esi isi ụtọ a bụkwa ekpere ndị nsọ.